Nispakhya National Weekly ( निस्पक्ष राष्ट्रिय साप्ताहिक ) online News Paper: १० वर्ष लडेका माओवादी नेताहरुले महल र पजेरो जोड्न सके । फाईदाको बिजनेस रैछ उनीहरुले भन्ने गरेको जनयुद्ध त ! - ओली
१० वर्ष लडेका माओवादी नेताहरुले महल र पजेरो जोड्न सके । फाईदाको बिजनेस रैछ उनीहरुले भन्ने गरेको जनयुद्ध त ! - ओली
एमालेका प्रभावशाली नेता शर्मा ओली कुनै सभासमारोहमा बोल्दा धेरैको ध्यान उहाँतर्फ आकषिर्त हुन्छ । भाषण गर्दा केही न केही कटाक्ष जोड्ने कलाले धेरैलाई उहाँप्रति आकर्षण बढाएको हो । राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठकको उद्घाटन समारोहमो विशाल पंक्ति अगाडि उभिँदा पनि ओलीले कटाक्ष गाँस्न भ्याउनुभयो । माओवादीको कटाक्षमा ओलीले आफ्नो लामो भाषणको क्रममा मिसाएका केही कटाक्ष यस्तो थियो:
· माओवादीले उत्ताउलो र उग्रव्यवहार मच्चाउँदै गएको छ । बाँदरलाई खेताला लगाएर कसैले पनि मकैको कुन्यु खडा गनै सक्दैन ।
· सरकार इतिहासकै सबैभन्दा भ्रष्ट, नालायक र अयोग्य भएको छ । अपराधीसँग कुम छोडेर हिंड्छ, तर उसलाई चिन्दैन । यो सरकार भ्रष्टाचार कहाँ गर्न पाइन्छ भन्दै सुंघ्दै हिंडेको छ ।
· पहिले माओवादीले भोट माग्ने क्रममा सुकुम्बासीलाई खोला किनारामा बस्न लगायो, अहिले उनीहरुसितै दादागिरी गर्दैछ ।
· ग्यासमा ध्यान छैन, पैसा सोहर्नै ध्याउन्न छ । विदेशी प्रभुलाई गुहार्न नै हैरान छन् । अब सजिलैसँग ग्यास पाउन दिन ल्याउन र अलिकति भनेपनि भ्रष्टाचार कम गर्न यो सरकार फेर्नुपर्छ ।
· कोही १० वर्ष काम गर्यो भने उसले छोराछोरीलाई साईकल पनि किन्न सक्दैन । १० वर्ष लडेका माओवादी नेताहरुले महल र पजेरो जोड्न सके । फाईदाको बिजनेस रैछ उनीहरुले भन्ने गरेको जनयुद्ध त ।
· १० वर्ष जनयुद्ध हाँकेपछि माओवादी नेताहरु टावर निर्माण गर्ने, पजेरोको सयर गर्ने हाकिम र नमस्ते गर्दा पनि नदेख्ने कामरेड भएका छन् ।
· माओवादीले अहिले पनि हैन र नत्रको भाषा बोलिरहेको छ । यस्तो हैन र नत्र आफ्नै गुरिल्लालाई भने हुन्छ, तिनले पनि पत्याउँदैनन् । अनि माओवादीले चिसै पानीले नुहाउँछ ।
· विष्णु शेष शैयामा सुतेको बेला उनको कानबाट निस्केका मधु र कैटभले उत्पात मच्चाउँछन् । तर बिष्णु जागेपछि ती चुप लाग्छन् । अहिलेसम्म एमाले शैयामा सुतेको जस्तो गरेको हो । अब सुतेको जस्तो गरेको एमाले शेष शैयाबाट बिउँझिएको छ ।